Al-Shabaab oo kolonyo Lanqaydha Cas ah ku weeraray Gedo - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo kolonyo Lanqaydha Cas ah ku weeraray Gedo Abriil 03, 2012
Al-Shabaab ayaa subaxnimadii Talaadada (3-da April) weeraray gaadiid xamuul ah oo u rarnaa Laanqaydha Cas ee Caalamiga ah (ICRC) oo sidey cunto deeq ah oo ku socotay gobolka Gedo, Dawladda Federaalka KMG ah ayaa sheegtay. Qodobbo la xiriira
6 lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay bannaanka hore ee xafiiska ra'iisul-wasaaraha Somaliya
Millatariga Soomaaliya oo al-Shabaab ku weeraray Gedo
Malleeyshiyaad dawladda raacsan oo qabsaday labo magaalo oo u dhaw Beledweyne
Afhayeen u hadlay ciidamada Federaalka KMG ah, Aaden Axmed Xirsi ayaa sheegay in kolanyo gaadiid ICRC u kiraysan ahayd lagu weeraray jidka isku xira degmooyinka Ceel-Waaq iyo Ceel-Cadde, sida ay sheegtay Idaacadda Shabeelle. Xirsi ayaa sheegay in darawal Soomaali ah weerarka lagu diley. Ciidamada DFKMG ah ayaa gaaray goobta ay wax ka dheceen iminkana samaynaya hawlo lagu ugaarsanayo kuwii weerarka geystay. Sarkaal ICRC-da ah ayaa sheegay in cuntada deeqda ah loogu talaggalay qoysaska Soomaaliyeed ee ay abaartu ku halakaysay koofur-galbeed Soomaaliya. Muxuu kula yahay qoraalkan?